Ma ị na-eme ya onwe gị ma ọ bụ na-arụ ọrụ na onye òtù m ga-amasị enye abụọ iberibe ndụmọdụ na m na hụrụ enye aka karịsịa nke m ọrụ. Mbụ, na-eche dị ukwuu dị ka o kwere tupu ọ bụla data e anakọtara. Ndụmọdụ a eleghị anya yiri ihe doro anya na-eme nnyocha agba nkịtị na-agba ọsọ nwere, ma ọ dị ezigbo mkpa n'ihi na ndị nnyocha agba nkịtị na-arụ ọrụ na nnukwu data isi mmalite (lee Isi nke 2). Na nnukwu data isi mmalite ukwuu n'ọrụ mere mgbe i nwere data, ma nwere ndị na-abụghị; ọtụtụ n'ime ndị na-arụ ọrụ ga-eme tupu ị na-anakọta data. Onye nke kasị mma ụzọ na-amanye onwe gị iche echiche nke ọma banyere gị imewe na analysis bụ ike na-aha otu analysis atụmatụ maka gị nnwale. Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ n'ime ndị kasị mma-omume maka analysis nke ibuo data e formalized n'ime akuko ụkpụrụ nduzi, na ụkpụrụ nduzi ndị a bụ ndị a akwa ebe na-amalite mgbe na-eke gị analysis atụmatụ (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011) .
Nke abụọ mpempe ndụmọdụ bụ na ọ dịghị onye nnwale na-aga ịbụ zuru okè, nke a mekwara ka, ị ga-agbalị na-chepụta a usoro nke nwere na sikwuo onye ọ bụla ọzọ. M na-ọbụna nụrụ nke a kọwara dị ka armada atụmatụ; kama ịnwa iru otu oke agha, i nwere ike ịbụ ka mma ụlọ nza nke obere ụgbọ mmiri na ya na-arụkọ eme nke oma. Ndị a iche iche nke multi-nnwale ọmụmụ na-eme na akparamaagwa, ma ha ndị obere n'ebe ndị ọzọ. Ọ dabara nke ọma, ala na-eri nke ụfọdụ digital nwere na-eme ka a ụdị multi-nnwale amụrụ mfe.
Ọzọkwa, m ga-amasị enye abụọ iberibe ndụmọdụ na ndị na-erughị nkịtị ugbu a ma na-mkpa karịsịa maka emebe digital afọ nwere: mepụta efu odide n'akụkụ peeji na-eri data na-ewu ụkpụrụ ọma n'ime gị imewe.